Lixabiso isichumiso Granule Round wokucoca Machine Suppliers kunye Factory | YiZheng
Yintoni umatshini wokuchumisa ojikelezayo weOrganic?
Isichumisi sokuqala se-organic kunye negranules yechumisi edibeneyo ineendlela ezahlukeneyo kunye nobukhulu obahlukeneyo. Ukwenza iigranules ezichumileyo zibukeke zintle, inkampani yethu iphuhlise umatshini wokucoca isichumiso somgquba, umatshini wokucoca isichumisi esidibeneyo njalo njalo.
Umatshini wokucoca isichumiso somgquba sisixhobo setyhula sokucoca ngokusekwe kwisichumiso somgquba kunye nesichumisi esidityanisiweyo. Yenza amasuntswana ombane aqengqele kwibhola, kwaye akukho nto ibuyayo, inqanaba eliphezulu lokumila kwebhola, amandla amnandi, inkangeleko entle kunye nokusebenza ngokuqinileyo. Isixhobo esifanelekileyo sesichumiso sezinto eziphilayo (ibhayoloji) ukwenza amasuntswana angqukuva.
Ukusetyenziswa koMatshini oChumileyo ojikelezayo
1.Isichumiso se-granulation se-bio-organic esenza i-peat, lignite, i-organic sludge sludge, umququ njengezinto eziluhlaza
2.Organic granulation isichumiso esenza umgquba wenkuku njengempahla ekrwada
Isichumisi 3.Cake esenza ikhekhe leembotyi zesoya njengempahla eluhlaza
Ukutya 4.Mixed leyo eyenza umbona, iimbotyi, ingca umgubo izinto ekrwada
5.Bio-feed leyo eyenza umququ yezityalo njengempahla ekrwada
Izinto eziluncedo ze Organic isichumiso Round wokucoca Machine
1. Iziphumo eziphezulu. Inokuguquguquka ukusebenza kunye okanye iigranulators ezininzi ngaxeshanye kwinkqubo, kusonjululwa isiphako sokuba i-granulator mayixhotyiswe ngomatshini wokugquma.
2. Umatshini wenziwe ngambini nangaphezulu wokucoca isilinda ngokulandelelana, izinto ziya kuphuma emva kokucoca amatyeli aliqela, imveliso egqityiweyo inobungakanani obufanayo, ukungqinelana okungaguquguqukiyo kunye nokubonakala okuhle, kwaye inqanaba lokubumba lifikelela kuma-95%.
3. Inesakhiwo esilula, ikhuselekile kwaye ithembekile.
4. Ukusebenza ngokulula kunye nokugcinwa.
5.Ukuziqhelanisa okunamandla, kunokusebenza kwiindawo ezahlukeneyo.
6. Ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, iindleko zokuvelisa eziphantsi kunye nezibonelelo eziphezulu zoqoqosho.
Isichumiso seOrganic seVolice yoMatshini weVidiyo
Isichumisi seOrganic sokujikeleza umatshini wokuPolisha
Ubume beMilo (mm)
Egqithileyo Umatshini wokuPakisha oPhindayo oBini
Okulandelayo: Umatshini wokuGcina isichumiso esimileyo